DAAWO:- Axmed Madoobe oo maanta Qado aan caadi ahayn loogu sameeyay Duleedka Boosaaso. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Qado sharaf ugu sameeyay deegaan-dalxiiseedka Biyo Kulule, Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo Wafdiga uu hogaaminayo ee booqashada ku jooga Boosaaso.
Kulanka waxaa ka qeybgalay Xildhibaano ka tirsan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Goleyaasha Dowladda ee Puntland iyo Jubaland, Maamulka Gobolka Bari, Kan Degmada Boosaaso, Siyaasiyiin hore xilal ugasoo qabtay Puntland iyo Soomaaliya, Odeyaasha Dhaqanka, Ganacsato, Culimo, Dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladda Boosaaso.
Khudbadaha Madaxweyanayaasha Puntland iyo Jubaland.
Posted by Puntland State House on Friday, January 17, 2020
Previous articleMaxay tahay Sababta Madaxwayne Deni u cafiyay Siyaasiyiintii iyo Odayaashii dhawaan lagu maxkamadeeyay Boosaaso?.
Next articleDhexdhexaadin muhiim ah oo laga dhex bilaabayo Dhinacyada Isku haya siyaasadda Somaliland “Yaa ku howlan?”.
Taajka Maakhir January 18, 2020 At 1:45 am
Sida meeshan Marqaan ah laga dheehan karo Soomaalidu badankeedu waa wada maan gurracan iyo garasho jaan. Labo muwaaddiniin Soomaaliyeed oo marna ah macaariif oo is marti qaaday ayaa sabab la’aan afka looga furanayaa. Bal maxaa ku jaban intaasi mise halis ah oo ku jirta?
Waa isla maanka aan halkan Marqaan ah iiga muuqda oo aad arkayso kuwo rag sheeganaya oo foodleyda sidooda goobtan uga dudaya calaashaan “hebel baa gobolka aan ka soo jeedo iyo nin madax ah oo aynu magac qabiil wadaagno runta iyo xaqa ka sheegaya”. Qaar ba iyana u arka in runta iyo xaqa oo goobtan oo kale laga sheego uu dembi kabaa’ir ah yahay maadaama ay soo yara cumreysteen.
La arki maayo iyaga oo si raganimo iyo ilbaxnimo lagu suntay u doodaya oo geesinimo wax iskaga dhicinaya ama se dabuubtooda iyo waxa ay aaminsan yihiin (sax iyo qalad ba) ragga kula doodaya. Aadmigu isku wada maan iyo dareen ma aha oo waa sida uu caafiimaadka ugu jiro bulshada horumarkeeda ee ilbaxnimada u ah naqaska iyo nafaqada xaraadda dhabta ah lagu gaaro.
Ma abid baa la isu nuudkuusaya? Maxay yihiin nasakhan iyo nusqaantani?
DAAWO VIDEO:Awooda Military Aduunka Turkiga oo Israel Dhinac Kasta Ka Dulmartay...
marqaan - September 25, 2020 0
Daawo:- Muwaadin reer Hargaysa ah oo dhac ugaystay Muwaadin reer Laascaanood...
Ali Osman - September 24, 2020 0
Puntland oo qaab cusub ula dagaalamaysa Burcada iyo Coronavirus
Sawiro:- Turkiga oo Buuhoodle ka dhoofsatay Hal abuure muhiim u ahaa...
marqaan - September 24, 2020 0